Egwuregwu ọgba tum tum kacha mma maka PC | Akụkọ akụrụngwa
Egwuregwu vidio moto bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị kachasị ọsọ na adrenaline, n'etiti ndị kachasị egwuri egwu bụ egwuregwu vidiyo ụgbọ ala, mana gịnị ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ibutu esemokwu anyị niile na azụ ọgba tum tum? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche mgbe ị na-ahọrọ egwuregwu nke anyị ga-egwu na ya, mana o doro anya na ọ dị ala karịa katalọgụ nke anyị na-ahụ n'ihe gbasara egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala.
Anyị nwere dịgasị iche iche n'etiti ihe atụ ole na ole dị, ebe ọ bụ na anyị nwere site na ndị simulators nke ọgba tum tum ụwa, na motocross, ebe nnukwu jumps na skids na apịtị pụtara. N'okwu a, akụkụ a họọrọ igwu egwu bụ njikwa dịpụrụ adịpụ, ebe ọ bụ na ọkwọ ụgbọ ụkwụ agaghị adị mma maka ịnya ọgba tum tum, ọ na-esikwa ike ịnweta ụdị ọgba tum tum na swingarm maka iji ụlọ. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa nke kachasị mma Egwuregwu ọgba tum tum maka PC.
1.1 Ọnọdụ ntanetị
2.1 Ọnọdụ ntanetị
3 Gbaa ịnyịnya 4
3.1 Ọnọdụ ntanetị
4 Nnukwu anụ ike Supercross
4.1 Ọnọdụ ntanetị
Nke a bụ ọgba tum tum simulator nke dabeere na MotoGP World Championship, nwere ụdị oyiri nke mounts anyị hụrụ na ezigbo egwuregwu na otu ndị na-agba ịnyịnya, ebe ọ bụ saga kwa afọ ọ na-aga n'ihu n'etiti nsụgharị, yabụ anyị na-ahọrọ ụdị nke anyị họrọ gameplay ga-yiri nnọọ. N'ezie, ọ na-egosi na ụlọ ọrụ studio ahụ na-ege ndị Fans ntị, yabụ anyị ga-ahụ mezigharị ọtụtụ njehie hụrụ na aga nkeji obere, na mgbakwunye na nke eserese eserese.
Agbanyeghi na o doro anya, ihe kachasị egwu egwuregwu vidio a bụ na ihe niile a na-ahụ anya bụ nke gọọmentị, n'ihi ikikere iko mba ụwa, anyị ga-enwe ezigbo ndị otu niile, ndị ọkwọ ụgbọ ala, ọgba tum tum na sekit. Nke a abụghị naanị maka ụwa nke klas mbụ, anyị nwekwara ihe niile anyị nwere ike ịhụ na Moto2, Moto3 na 500cc ọnụọgụ abụọ na MotoGP akụkọ ihe mere eme okpukpu anọ ma ọ bụ ọnọdụ MotoE ọhụrụ.
Anyị na-egosikwa ọnọdụ ọrụ zuru oke nke na-enye anyị ohere ịbanye maka ezigbo otu ma ọ bụ mepụta nke anyị. Kama ịbụ agbụrụ dị iche iche na-enweghị mkpali, anyị nwere na mgbakwunye na ịsọ mpi, anyị ga-ejikwa akụkụ dị iche iche nke ọrụ ọrụ anyị dị ka ndị ọkwọ ụgbọ elu, gụnyere ndị na-akwado ya, ịbanye ndị ọrụ ma ọ bụ na-agbanwe ugwu anyị.
Anyị nwere ọnọdụ ntanetị maka egwuregwu iri na abụọ ejikọtara ọnụ ma nwee obi ụtọ n'ụdị dị iche iche, dịka arụmụka ma asọmpi ọha na nke ọha ma ọ bụ ọbụna họrọ asọmpi n'oge ọhụrụ nke eSport. Ihe a nile na sava raara onwe ya nye nke na-ekwe nkwa ezigbo ihe igwu egwu n'enweghị nsogbu. Egwuregwu vidio a na-eji nwayọọ nwayọọ emelite ndị egwuregwu ya ka ọ dị mma na nke ọ bụla.
Motocross egwuregwu nke mechara hụ ìhè n'agbanyeghị ọrịa ahụ na-efe efe, egwuregwu ahụ jigidere omume ọma niile nke onye bu ya ụzọ mana ọ na-emeziwanye na ngalaba ihe ngosi. Ọ bụ egwuregwu mbụ anyị nwere ike igwu egwu dị ka Jorge Prado, onye ọkwọ ụgbọ mmiri Galician na-anọchite Spain na egwuregwu ahụ. Amda olu na-aga otu nzọ ụkwụ ọzọ ma weghachite mkpọtụ ọgba tum tum dịka ọ dịtụbeghị mbụ dị ka olu na agbamume ọha na eze nyere ndị ọkwọ ụgbọelu.
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, egwuregwu a gụnyere sekit 19 nke mejupụtara oge 2020 mgbe gụnyere Lommel na Xanadu na nkọwa zuru oke. Anyị nwere nke anyị nwere 68 ndị na-agba ịnyịnya nke ụdị dị iche iche, site na 250cc ruo 450cc yana ihe karịrị 10.000 ukara akpọkwa ahaziri niile aesthetics na arụmọrụ nke anyị ọgba tum tum.
Ọ dịghị anya n'azụ usoro ụdị egwuregwu gụnyere kpochapụwo Ọrụ, Grand Prix, Oge Ikpe na Asọmpi Onye mmeri. Na ọnọdụ trajectory ebumnuche anyị ga-amalite site na nke dị ala site na onye ọkwọ ụgbọ ala nke anyị ga-ahaziri ka ọ masịrị anyị ma anyị ga-enweta ahụmịhe na ndị na-akwado ya ịrịgo elu.
Ọtụtụ mode na-apụghị na-efu efu, ukwuu rụọ ngalaba a gụnyere akpatre raara onwe ya nye sava. Nke na-enye ohere inweta ọtụtụ egwuregwu mmiri na-enweghị egwu egwu nke na-emebi agbụrụ ahụ. Anyị nwetakwara Directorkpụrụ Director nke agbụrụ iji mepụta asọmpi nke anyị ma gbasaa ha ndụ site na itinye igwefoto.
Gbaa ịnyịnya 4
Saga nke ndị okike nke MotoGP nke na-enye ọhụụ dị iche banyere ihe ịgba ọsọ ọgba tum tum bụ, na-adọta maka ọhụụ na-adịchaghị njọ. Ka anyị kwuo na ọ bụ njem nlegharị anya nke ọgba tum tum, ịkụ nzọ na ịme anwansị iji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọgba tum tum n'okporo ámá anyị nwere ike iche.
Na nke anọ ya nkeji anyị na-ahụ a remodeled graphic ọdịdị na-abịa jupụta ọzọ emana PS5 na Series X consoles nakwa dị ka ndị kasị ike PC. Oge izizi anyị ga - ahụ etu ihu igwe dị egwu na - atụ anya, nke ga - enyere anyị aka ịmalite egwuregwu n’igwe ojii na igwe ojii ma mechaa ya mmiri ozuzo. A na-esonyekwa okirikiri abalị na ehihie ka anyị wee nwee ike ịmalite agbụrụ n'ehihie wee mechaa ha na mgbede.
Egwuregwu egwuregwu adịghị iche na onye bu ya ụzọ na ọ bụ na anyị na-amalite na ọnọdụ ọrụ ebe nhọrọ mbụ anyị bụ mpaghara mpaghara nke anyị bu n'obi ịmalite dị ka ọkachamara. Dabere na ihe anyị họọrọ, anyị ga-agba ọsọ n'otu sekit ma ọ bụ ndị ọzọ nke anyị ga-agafe ule dị iche iche iji gbagoo. Egwuregwu ahụ na-achọ ihe gbasara egwuregwu ma na-enye ọtụtụ ihe dị adị kamakwa ọ na-enwe nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ijikwa ugwu ahụ na ọsọ zuru oke.
Anyị nwere ụgbọala na ego anyị ga - erite ka anyị na - aga n’ihu n’egwuregwu ahụ, ebum n’uche anyị ga - abụ iji jupụta ọgba tum tum nke ọgba aghara niile. ma melite ha ruo oke. Ka anyị na-aga n’ihu n’egwuregwu ahụ anyị ga-emere onwe anyị aha ma nke a ga-enye anyị ohere ịwụli n’otu egwuregwu ụwa na SuperBikes ụwa.
The ọgba tum tum katalọgụ rute ọnụ ọgụgụ nke 175 Moors sitere na 22 ndị nrụpụta dị iche iche, site na 1966 ruo ugbu a. N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ onye na-anụ ọkụ 30 ezigbo sekit, megharịrị ka ike gwụ. Ejiri nlezianya lekọta akụkụ ihe nkiri ahụ, na-agụta na nyocha 3d laser maka ma mounts na ndị ọkwọ ụgbọ elu. Ihe eserese nke ndị na-agba ịnyịnya na ọgba tum tum na-efegharị bụ ihe ezi uche dị na ya, na-eme ka o doo anya oge na nlekọta e nyefere na ngalaba ahụ.
The egwuregwu nwere pụtara mfe online mode na ole na ole egwuregwu ụdịdị, ma ha ga-abụ a siri ike litmus ule na-egosi onye bụ ihe kasị mma ọkwọ ụgbọala na net na agbụrụ na ruo 12 Player mba. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụdịdị na-efu, yana otu mpaghara nkewa-ihuenyo ọtụtụ ọnọdụ.
Ihe a ga-enwe ekele maka ya bụ na anyị raara onwe anyị nye sava, yabụ mmiri na ogo nke egwuregwu ahụ ga-adị mma. N'izugbe ọtụtụ mmadụ dị mma ma na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụ ezie na a hapụrụ anyị ụtọ ekpomeekpo ma ọ bụrụ na anyị echebara oke nke aha ya na nlekọta nke enyerela akụkụ ndị ọzọ.
Nnukwu anụ ike Supercross
Egwuregwu motocross dị mkpa nke Monster na-a drinksụ nke ihe ọ drinksụ drinksụ nke anyị na-ahụ ndị na-agba ịnyịnya, sekit na ndị ọrụ gọọmentị nke egwuregwu America. Ihe dị iche n'etiti ihe ọ bụla bụ ọkwa dị elu nke anyị na-ahụ na aha a. Anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti aghụghọ dị iche iche, akara, agba nke okpu agha, iko, akpụkpọ ụkwụ, ndị nchebe, akwụkwọ mmado ... Ozugbo ahịhịa amị gachara, anyị ga-arụ ọrụ na ebumnuche anyị iru n'elu.
Anyị na-eche ihu egwuregwu nke na-enweghị ịbụ simulator dị ọcha, abụghị ihe egwuregwu zuru ezu, yabụ ịgbaso nkuzi ahụ nke ọma ga-enyere anyị aka nke ukwuu mgbe ị na-anya ụgbọala. Enweghị ọnọdụ isi ike, yabụ usoro nsogbu ga-aga n'ihu, site na mbido, ọ dịghị mfe iji merie agbụrụ, ma ihe ga-aka njọ ka anyị na-aga n’ihu. Ọ gaghị adị mfe idobe igwe kwụ otu ebe ma, yabụ ọ ga-abụ ihe a na-ahụkarị ka anyị jiri obere mgbagha kụọ n'ala.
Anyị nwere ọnọdụ a na-akpọ Mgbagwoju, ebe anyị na-ahụ ihu ala dabere na agwaetiti Maine, nke anyị ga-enwe kilomita nke ịnya ụgbọ ala n'efu iji nwalee nka anyị. Anyị nwekwara ụfọdụ sekit SuperCross na otu nke MotoCross ebe ị nwere ike iso ndị enyi soro.
Akụkụ ihe nkiri ahụ dabere na PC anyị nwere, mana ọ bụrụ na anyị nwere ezigbo igwe, anyị ga-enwe ọ enjoyụ agbụrụ na nnukwu eserese., ederede na oge itinye oge ka mma. Special aha na physics nke ọgba tum tum na karịsịa track. Cirfọdụ sekit nwere okpokoro apịtị, ebe igwe kwụ otu ebe anyị ga-ahapụ ụzọ ha wee si na apịtị apịtị ahụ. Ihe eserese a na-esonyere ya na ụda olu dị mma, nke na-egosipụta okwute na mkpọtụ ntị nke ọkpọkọ iyuzucha.
Nke a bụ ebe anyị nwere ike ịchọta obere akụkọ, ebe ọ bụ na ụdị egwuregwu a anaghị agbanwe ọtụtụ ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ, mana anyị nwere ike ịnụ ụtọ agbụrụ site na egwuregwu iri abụọ na abụọ. Egwuregwu ahụ raara onwe ya nye sava nke ga-ezere nhụjuanya na-atụghị anya ya ma ọ bụ ọpụpụ na-atụghị anya ya ma ọ bụrụhaala na njikọ anyị na-enye anyị ohere ịme ya. Anyị nwere ike ịhazi asọmpi n'etiti ndị obodo site na modedị Nduzi Ọsọ, ebe anyị ga-abụ ndị nhazi ma anyị nwere ike ịgbasa asọmpi ahụ na oke mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Egwuregwu ọgba tum tum kacha mma maka PC